Anyị gbara nwanyị nwanyị Mexico ajụjụ ọnụ ma wetara Aro na ndụmọdụ Coronavirus na Mexico - 1aviagem.com
Gara aga post: Kedu ka ọ ga - esi nwee ụgbọ njem ọha na-akwụghị ụgwọ? - Estonia - Tallinn
Nkwupụta na-esote: Pilanesberg Park - safari foto na nkuzi ụmụ anụmanụ - South Africa
Anyị gbara otu nwanyị onye Mexico ajụjụ ọnụ ma weta Aro maka Corona Virus na Atụmatụ banyere Mexico!
Ezutere m Érika n’oge nri abalị na Rio de Janeiro. Ọ sonyeere ndị otu anyị, anyị mekwara otu okpokoro. Érika na-achọkarị ihe gbasara okpokoro anyị.
Anyị nwere ndị sitere na: Hungary (you ga - ahụ ajụjụ ọnụ nke ezigbo enyi a, Chris, site na ịpị ebe a), United States, Australia, onye nlegharị anya bụ Argentine - ee anyị nwere onye ndu Argentine na-egosi Brazil - na abụ m onye Brazil na m gara Rio de Janeiro ịnabata enyi m si Australia. Érika na Diego bụcha ndị Mexico! Nke ahụ mekwara tebụl anyị ọbụna karịa nke mba niile.
Anọ m mgbaghara maka onye na-eche ihe, ọ mere anwansi n’ewetara anyị efere na ihe ọ drinksụ drinksụ anyị. Ihe ọma mere mụ na Erika mere ka ọ dịrị ya mfe.
Otu a ka m zutere Erika D. Barron na aga m agba ajụjụ ọnụ taa.
Enweghịkwu mmezi ka anyị gaa ajụjụ ọnụ ahụ!
Dịka ọ dị na mbụ na ajụjụ ọnụ a na blog a, a ga-agbanwe agba dị ka onye kwuru. (Anyị ga-eji agba dị iche na Mexico na Brazil).
1- Erika, ebe amuru gi, oleekwa ebe i bi taa?
Amụrụ m n’obere obodo dị n’ebe ugwu Mexico a na-akpọ Tampico na steeti Tamaulipas. Mana kemgbe afọ asaa gara aga akwagara m isi obodo Mexico City.
2- Ma gini bu oru gi?
M na-arụ ọrụ n’ụlọ ọrụ ọgwụ dịka onye njikwa ahụike.
Ikwu okwu banyere Coronavirus
3- Ya mere nke ahụ pụtara na anyị nwere onye anyị ga-atụkwasị obi maka Coronavirus. Erika, ebe a na Brazil anyị nwere ọtụtụ ihe ọmụma banyere nke a. Na otutu egwu di kwa. N’ihi ya, m kwesịrị ịjụ gị: Ànyị kwesịrị ichetara ndị mmadụ na onye ọ bụla bu ọrịa coronavirus abụghị ikpe ọnwụ? A na m ajụ otu a maka na ebe a na Brazil naanị ndị mmadụ na - akọ akụkọ gbasara ndị butere ọrịa yana mmadụ ole nwụrụ n'ihi nke a. Echere m na nke ahụ abụghị eziokwu. Ma enwere ike ihie ụzọ. Enwere ndị na-agbake?
Iji zaa ajụjụ nke mbụ, anyị kwesiri icheta na ihe mgbaàmà nke ọrịa coronavirus bụ: ahụ ọkụ, ụkwara, iku ume, n'etiti ihe mgbaàmà ndị ọzọ nwere ike ịbụ akpata oyi, ahụ mgbu, isi ọwụwa, ọgbụgbọ, imi mkpọchi… ya mere ndị a mgbaàmà ya na ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ, gụnyere flu.
Yabụ, mba, ọ bụrụ na ị nweta coronavirus apụtaghị na ị ga-anwụ. Ọ bụrụgodị na dọkịta achọpụta na ị na-arịa coronavirus, ụjọ atụghị gị. CDC na-akọ na ọ bụ naanị ndị okenye agadi na ndị nwere ọrịa ọgwụ na-adịghị ala ala ma ọ bụ nke siri ike, dị ka ọrịa shuga ma ọ bụ obi, ma ọ bụ ọrịa akụrụ, ma ọ bụ ọrịa akụrụ, bụ ndị kachasị nọrọ n'ihe ize ndụ.
Ọtụtụ n'ime ọrịa ọrịa coronavirus kọrọ bụ ọrịa dị nro. Na ndị siri ike na-ewere ọnọdụ na 16% nke ikpe ahụ. Ọtụtụ ikpe a kọrọ na-aka mma ma na-ewepụ ha n'ụlọ ọgwụ.
4- Yabụ anyị nwere ike were coronavirus ahụ dị ka “SARS ọhụrụ”, gụnyere ụzọ mgbochi? Nke a gụnyere nlekọta bụ isi dịka: ịsa aka gị, ịkwa ụkwara n’elu ndị ọzọ, ma ọ bụ iyi nkpuchi ma ọ bụrụ na oria?
Ee, nke a bụ ụzọ kachasị mma iji gbochie ọrịa ahụ. Ime ihe dị ka izere iso ndị ọrịa akpachi anya, ịzere imetụ anya, imi na ọnụ aka, ikpuchi ụkwara ma ọ bụ itinye ihe n’akpịrị ma ọ bụ n’ime ogwe aka gị ma jiri ncha na mmiri kwọọ aka gị. ụzọ ịgwọ ọrịa, mana ụzọ kachasị mma iji gbochie ọrịa.
5- Enwere ebe (webụsaịtị) nke nwere nkwanye iji zere ụfọdụ njem?
Ee, m ga-akwado ịlele ihu akwụkwọ CDC (Ebe Ọrịa Ọrịa):
Peeji a bu ezigbo ihe omuma banyere sayensi na nke tozuru oke, ndi dibia na-acho ya site n’oge ruo n’oge.
6- Ọ dị mma, na-ekwu maka ebe dị ugbu a, ka anyị mee ka ihe ka mma. (Ka emechara nke a bu blog njem). Anyị na-ekele gị maka iweta nkọwa a niile gbasara coronavirus.
Erika, mana ugbu a dịka onye Mexico, gịnị kacha amasị gị maka Mexico?
Enwere ọtụtụ ihe na-amasị m na Mexico, m ga-adị n'etiti ọdịbendị na nri.
7- Kedu ihe ị ga - agbanwe na Mexico ma ọ bụrụ na ị ga - emeli ya?
Ọ bụrụ na m nwere ike, aga m agbanwe oke maka inye ndị ọrụ gọọmentị ihe ma tinye ha na agụmakwụkwọ na ahụike.
8- Gịnịkwa bụ nri kacha atọ gị ụtọ?
Tacos al past, n’ezie. Should kwesịrị ịnwale ha
9- Ebe ọ bụ na anyị na-ekwu maka Mexico, olee ebe ị ga-akwadoro maka njem nlegharị anya? (Karia na njem nke mbụ m na Mexico ọ bụrụ na pyramid Mayan masịrị m, na osimiri ndị dị na Cancún, Tulum ... enweghị m ike ikwu nke kachasị mma).
Mexico nwere ọtụtụ ebe ndị njem na-aga, ọ ga-adabere n'ụdị ihe ọchị ịchọrọ. Cancún na Los Cabos dị ezigbo mma, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye n'ime ọdịbendị m ga-akwado Oaxaca, San Miguel de Allende na Merida.
10- Amaara m na ị bi na Brazil nwa oge! Kedu ihe kacha amasị gị? Ndi ndi Brazil muru gi nke oma? Enwere m olileanya na, ma ọ bụ m ga-akụ mmadụ. Kedu ka onye ọ bụla na-agaghị emeso Erika nke ọma? O nyeere aka ịtụgharị ihe maka onye na-eche ihe. Ọ bụ ihe ịtụnanya!
Ah, ekele maka okwu ọma. Ahụrụ m Brazil n'anya! Nri ahụ dị ebube, ndị ọrụ ya na-enwekwa omume enyi! Enwere m ike ibu ibu karịa ebe ahụ.
Ndị Brazil m mesoro m nke ọma, ha nwara ịsụ “portunhol” (Portuguese + Spanish) nke nyeere obere aka maka ndị na-anaghị asụ Portuguese. hehe.
11- Ọ dị mma, enwere ntụnye ọ bụla maka Brazil iji meziwanye?
Ọ bụghị n’ezie, ịkwesịrị ịdị nganga maka ọdịnala gị.
12- Ọ dị mma, kedu maka okwu ikpeazụ tupu anyị akwụsị ajụjụ a? Ihe ọ bụla ọzọ ịchọrọ ịkekọrịta, ka edekọ na blọọgụ a?
Nwee ahụike ma nwee ndụ!
28-ụbọchị nke mba ụwa nke ọrịa na-adịghị ahụkebe. (bụ akara ngosi ahụ sere n’aka Erika)
Erika, enwere m obi ụtọ ịgwa gị okwu ọzọ. Ekele maka ajụjụ ọnụ a, yana nkọwa niile gbasara coronavirus. Ọzọkwa maka ndụmọdụ na Mexico!
M ga-ejikwa ọkwa a kwụsị.
Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, kwado blog a site na ịpị bọtịnụ uhie dị n'akụkụ. Ma ọ bụ gụkwuo ndị ọzọ site na ịpị ụwa dị n'okpuru.
Ajụjụ ọnụ Coronavirus Mexico Mexico Portunhol tacos